अमेजनमा तपाईको रैंकमा सुधार गर्न सक्नु हुन्छ TOP Amazon खोजशब्द प्लानरहरू के हो?
जब अमेजन रिटेलिङ प्लेटफर्ममा तपाईंको व्यवसाय सुरुवात गर्न आउनु हुन्छ, तपाईलाई सुरुमा केही फरक चरणहरू मार्फत जानु आवश्यक छ. पहिला, तपाईले बजार आचार्य चयन गर्नु आवश्यक छ जहाँ तपाईं आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईंले निर्णय गर्न आवश्यक छ कि कुन उत्पादनहरूले तपाईलाई सबैभन्दा अधिक लाभ ल्याउनेछ र आपूर्तिकर्ताहरू पत्ता लगाउनेछ. यसबाहेक, तपाईंलाई अमेजन बिक्रेता कार्यक्रममा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ (तपाईंको व्यवसाय आवश्यकता र उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ). जब सबै समस्याहरू समाधान भएमा, तपाईले तपाईको अमेजन व्यापार सुरुवात गर्ने मुख्य भागको साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ - खोजशब्द अनुसन्धान.
तपाईंको अमेजन उत्पाद लिस्टिङको लागि सञ्चालन खोजशब्द अनुसन्धान पछ्याउन जरूरी निश्चित मार्ग हो. यी चरणहरू पछ्याउँदै तपाईंले उच्च मात्राको खोजी सर्तहरू र ती लामो-फरक अनौठो शब्दहरू उल्टाउन सक्षम हुनुहुनेछ जसले तपाईंको उत्पादन पृष्ठलाई आंशिक सर्तहरूका लागि अमेजन खोजी परिणाम पृष्ठको शीर्षमा बढाउन सक्छ।.
यस आलेखमा, हामी तपाईंको अमेजन खोजशब्द अनुसन्धान अभियानको आवश्यक चरणहरू मार्फत जान्छौँ र सिक्नुहोस् अमेजन कुञ्जीपाटी प्लानरहरू विकास प्रक्रियाको समयमा तपाईंको विश्वसनीय सहयोगी हुन सक्दछौं।.
अमेजन खोजशब्द अनुसन्धान चरणहरु
हाम्रो दिनहरुमा, अमेजन मा प्रतियोगिता एक cutthroat स्तर छ. यसैले यो भीडबाट बाहिर खडा गर्न गाह्रो हुन सक्छ. तपाई केवल Amazon मा आफ्नो उत्पादनहरू राख्न सक्नुहुन्न र बिक्रीको लागि पर्खनुहोस्. सम्भावित विक्रेताहरूले आफ्नो सम्भावित ग्राहकहरूमा पुग्न सबै भन्दा राम्रो गर्न आवश्यक छ. अमेजनमा सफलताको प्राथमिक कुञ्जी तपाईँको सूचीबद्ध अनुकूलनको लागि सही शब्दहरू छान्नु हो. पर्याप्त अनुसन्धान गर्न, तपाइँलाई आफ्नो ग्राहकको आवश्यकताहरु र मागहरु मा ध्यान दिन आवश्यक छ. यसले तपाईंलाई सान्दर्भिक र अधिकतम सटीक खोज सर्तहरू फेला पार्न मद्दत गर्नेछ जुन विक्रेताले अमेजनमा तपाईंको उत्पादनहरू खोज्न प्रयोग गर्दछ.
स्पष्ट अमेजन विशेषताहरु मार्फत जानुहोस्
तपाईं पसलको रूपमा खोजको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन खोजी सर्तहरूसँग तपाइँको सूची सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।. यसले तपाईंको अनुसन्धान अभियानको लागि सही दिशा निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ. तपाइँ नयाँ खोजशब्द विचारहरू फेला पार्न उत्पादनको सुविधाहरू मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ.
प्राथमिक सुविधाहरु को मूल्यांकन
भौतिक सुविधाहरु को अतिरिक्त, तपाईं फायदे को विचार गर्न सक्छन् आफैलाई व्यवहार गर्दछ साथै माथि सूचीबद्ध प्रत्येक सुविधा. तपाइँलाई तपाइँको लिस्टको लागि सान्दर्भिक लामो-पूर खोज सर्तहरू फेला पार्न बेच्ने उत्पादनहरूको सबै सम्भावित फाइदाहरू सूचीबद्ध गर्न आवश्यक छ. त्यसपछि तपाइँ चयन गरिएको शब्द सर्तहरू तिनीहरूको प्रासंगिकता र खोजी क्षमतामा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले यसलाई म्यानुअल रूपमा वा अमेजन खोजशब्द प्लानरको सहयोगको साथ गर्न सक्नुहुनेछ.
समकक्षों र सम्बन्धित सर्तहरु को लागि खोज
प्रथा शो को रूप मा, मान्छे लाई उनको खोज इरादे को वर्णन गर्न को लागि शब्दहरु र वाक्यांशहरु को उपयोग गर्दैनन अमेजनका लागि. यही कारणले तपाईले प्रत्येक चयन गर्नुभएको छनौटका लागि कम्तीमा दुई वा तीन समिकरणहरू फेला पार्न उचित छ. सान्दर्भिक समकक्ष खोजी गर्न उपकरणहरू प्रयोग गर्न सरल थिस्सोस हो. com. तपाईंको उत्पादन वर्णन गर्न अन्य सर्तहरू पत्ता लगाउन, तपाइँ अमेजनमा फर्कन सक्नुहुन्छ. com. केवल तपाईको खोजशब्द को पहिलो केहि अक्षर अमेज़न खोज बक्से मा सम्मिलित गर्नुहोस, र तपाईंलाई सम्बन्धित उत्पादन को एक सूची संग प्रदान गरिनेछ जो तपाईंको उत्पादन को वर्णन गर्दछ Source .